“Mane wuxuu iska ilaalinayaa rigoorayaasha sababa la xiriira Mohamed Salah.” – Owen – Gool FM
(Liverpool) 05 Maarso 2021. Xiddigii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen ayaa shaaca ka qaaday aragtidiisa ku aadan ka fogaanshaha Sadio Mane, inuu ku dhaco xerada ganaaxa kulankii xalay ee Chelsea.
Haddaba Michael Owen ayaa sheegay in Sadio Mane uu ka fogaanayo isku dayga ah in lagu galo rigoore, sababa la xiriira in Mohamed Salah uu goolal ku dhalin doono.
Michael Owen ayaa taabasho fudud loogu sameeyay xerada ganaaxa ee kooxda Chelsea inta lagu guda jiray kulankii xalay ka dhacay garoonka Anfield, laakiin ma doorbidin inuu dhulka isku tuuro, wuxuuna ku dagaalamay kubadda, balse wuu ku guuldarreystay inuu dib u soo ceshado.
Xiddigii hore kooxda Liverpool ee Michael Owen oo ka hadlayay arrintan ayaa wuxuu yiri:
“Ma rumeysan karo in Sadio Mane uusan ku dhicin dhulka kulankaan … Eeg, kuma faraxsani, waxa uu sameeyay.”